Shaxda daboolan Warshadda | Shiinaha Miis daboolan Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Iyada oo lagu shaqeynayo xoog leh iyo muuqaal soo jiidasho leh, daboolka miiska lagu rakibay oo leh jiinyeer dhabarka dhab ahaantii waa mid loo baahan yahay bandhigyo ganacsi iyo bandhigyo! Marka la barbardhigo tuurista miiska, midka la rakibay ayaa leh shuruud sare oo cabbirka cabbirka miiska oo miiska ku daboolaya maro yar. Intaa waxaa dheer, daboolka miiska lagu rakibay gadaashiisa jiinyeerku waa sahlan yahay marin loo helo oo ku habboon in la keydiyo.
Jadwalka la rakibay wuxuu ku daboolayaa kala-jajab
Miis la rakibay ayaa dib u daboolaya iyadoo jeexjeexa uu sahlayo helitaanka alaabada ku keydsan miiska hoostiisa. Waa bedel weyn oo loogu talagalay dhacdooyinka iyo bandhigyada ganacsiga marka la helayo alaabada, qalabka, ama alaabada miiska hoostiisa. Intaa waxaa sii dheer, jeexitaanka gadaal wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si raaxo leh u fadhiisato miiska gadaashiisa iyada oo marada miiska aysan ku soo dhicin.
Miiska loo habeeyay qalabka la daboolay oo dib loogu jajabinayo jeexitaanku waa hab la yaab leh oo sahlan oo la awoodi karo oo lagu keeni karo joogitaan xirfad leh bandhigyada ganacsiga, bandhigyada, ciidaha, carwooyinka shaqada, iyo heshiisyada.
Miiska xayeysiinta ah ee daboolaya jeexjeexa dhabarka ma aha oo kaliya inuu u muuqdo mid weyn laakiin sidoo kale wuxuu si fudud u heli karaa alaabada miiska hoostiisa. Tan macnaheedu waa inaad ku keydin kartid alaabadaada dhacdooyinkaaga ama alaabtaada shakhsi ahaaneed meel aan la arki karin, yareynta isku-buuqsanaanta aragga iyadoo la ilaalinayo awoodda aad ku soo jiidan karto fiiro gaar ah.
Daboolida Miiska Khafiifka ah ee Khaaska ah
Iyada oo ah isku dheelitirnaan weyn oo udhaxeysa qaababka rasmiga ah iyo kuwa aan caadiga aheyn, daboolka miiska ayaa si ballaaran loo adeegsadaa hudheelada, goobaha dalxiisyada, xarumaha shirarka, waxayna ku habboon yihiin jawi kala duwan iyadoo aan loo eegin inay tahay bandhig ganacsi oo xirfad leh ama isu imaatin shaqsiyeed. Miiskaaga oo lagu sharraxay dharka jilicsan, isla markiiba wuxuu u muuqan doonaa mid heer sare ah.